ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟွန်ဒေး GRX များ | ဟွန်ဒေး GRX ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
A/C: Front (67)
A/C: Rear (56)
ဒီအဖြူရောင်Hyundai GRX Starex GOOD 2007 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lks 132 ပဲကျတဲ့အတွက် ဘယ်မှာမှဒီလိုဈေး‌နဲ့ ကားကောင်း‌တစ်စီးရနိုင်မှာ...
2005 Hyundai GRX Starex GOOD
Hyundai ရဲ့ကားအကောင်းစာရင်းဝင် GRX Starex GOOD 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဟာ Manual ဂီယာနဲ့ 50000ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီး ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ 128 Lksရောင...
2004 Hyundai GRX Starex GOOD
Hyundai ရဲ့ကားအကောင်းစာရင်းဝင် GRX Starex GOOD 2004 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဟာ Manual ဂီယာနဲ့ 50000ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီး ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ 128 Lksရောင...
2006 Hyundai GRX Starex GOOD
ဒီငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex GOOD 2006 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lks 134 ပဲကျတဲ့အတွက် ဘယ်မှာမှဒီလိုဈေး‌နဲ့ ကားကောင်း‌တစ်...
ဒီငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex GOOD 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lks 130 ပဲကျတဲ့အတွက် ဘယ်မှာမှဒီလိုဈေး‌နဲ့ ကားကောင်း‌တစ်...
ဒီံငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex GOOD 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks130 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Manualဂီယာ နဲ့အတူ ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းများပါတာ...
ဒီငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex good 2006 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lks 133 ပဲကျတဲ့အတွက် ဘယ်မှာမှဒီလိုဈေး‌နဲ့ ကားကောင်း‌တစ်...
Hyundai ရဲ့ကားအကောင်းစာရင်းဝင် GRX Starex good 2007 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဟာ 50000ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီး Automatic ဂီယာ နဲ့ ခေတ်မှီသောကားပစ္စည်းမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ် ။ Lks 135...
ဒီံငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex good 2007 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks135 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Manualဂီယာ နဲ့အတူ ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းများပါတာ...
ဒီံငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex good 2006 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks133 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Manualဂီယာ နဲ့အတူ ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းများပါတာ...
အဖြူရောင် ရောင်နဲ့ ဤHyundai GRX Starex good 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကားသည် 128 Lksရောင်းဈေးနဲ့မို့လို့ အလွန်တန်တဲ့ကားပါ။ ဒါကြောင့်မို့ သင်လက်မလွတ်ပါစေနဲ့ ။ မောင်းနှင်ပြီး 500...
ဒီHyundai GRX Starex good 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks130 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Manualဂီယာ နဲ့အတူ တခြားကောင်းမွန်‌သော ကားပစ္စည်းများပါတာ‌ကြောင့် အရမ်...
ဒီHyundai GRX Starex good 2006 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks132 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ့အတူ တခြားကောင်းမွန်‌သော ကားပစ္စည်းများပါတာ‌ကြောင့် အ...
ဒီအဖြူရောင်Hyundai GRX Starex GOOD 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနုင်ပါသည်။ SERVICE များကိုလည်းတနှစ်တိပေးထားသည့်အပြင်အင်ဂျင်နှင့်ဂီယာဘောက်အား၆လအာမခံပေးထားပါသည်။၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်းလူကြီးမင်...
ဒီငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex 2004 ဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lks 125 ပဲကျတဲ့အတွက် ဘယ်မှာမှဒီလိုဈေး‌နဲ့ ကားကောင်း‌တစ်စီးရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Motors.c...
ဒီံငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex GOOD 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။TCIဟာ Lks133 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Manualဂီယာ နဲ့အတူ ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းများပ...
ဒီံငွေရောင်/မီးခိုးရောင်Hyundai GRX Starex good 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks132 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 550000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ့အတူ ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းများ...
ဒီHyundai GRX Starex good 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks130 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Automaticဂီယာ နဲ့အတူ တခြားကောင်းမွန်‌သော ကားပစ္စည်းများပါတာ‌ကြောင့် အ...
ဒီံအဖြူရောင်Hyundai GRX Starex good 2005 အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူ၇၇ှိနိုင်ပါသည်။ဟာ Lks135 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 50000ကီလိုမီတာ၊ Manualဂီယာ နဲ့အတူ ခေတ်မှီသော ကားပစ္စည်းများပါတာ‌ကြောင့် အရမ...
Hyundai GRX Starex 2004
Silver Hyundai GRX Starex 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. ပြတင်းပေါက်များမ...
ဟွန်ဒိုင်း ဂျီအာ အိတ်ခ်ျ စထရတ်ခ်ျများ
ဟွန်ဒိုင်း ဂျီအာအိတ်ခ်ျ စထရတ်ခ်ျကားတွေက စထရတ်ခ်ျကားတွေနဲ့ အမျိုးအစား တူညီတဲ့ ကားတွေပါပဲ။ ဟွန်ဒိုင်း အိတ်ခ်ျ ၀မ်းလို့လည်းခေါ်ပြီး သူက ဟွန်ဒိုင်း ဂရန် စတာရတ်ခ်ျတို့ထက် မော်ဒယ် နိမ့်တဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ၂၀၀၇ အောက်ပိုင်း မော်ဒယ်တွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းကြောင့် အသုံးနည်းပေမဲ့လို့ ဈေးသက်သာလို့ အနည်းအကျဉ်း သုံးကြတာတွေ့ရှိပါတယ်။ ပထမ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်လောက်ကတည်း က ထုတ်တဲ့ စထရတ်ခ်ျကားတွေကတော့ ဒီဇိုင်းမှာ နည်းနည်း ခေတ် လွန်နေပါပြီး။ ၂၀၀၃ လောက်ဆို ပုံတုံးပြီး ၂၀၀၆ လောက်ဆိုလျှင်သူနောက် ဒုတိယ မျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ဆင်တူပါပြီး။ ဒီလို ၂၀၀၈ အောက်တွေကိုတော့ လေလံကနေတော့ ထပ်ပြီး သွင်းတာတွေ့ မရှိတော့ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာသာ အချင်းချင်းပြန်လည် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟွန်ဒိုင်း ဂျီအာအိတ်ခ်ျ စထရတ်ခ်ျကားတွေကတော့ ပိုပြီး ဒီဇိုင်း ဆန်းပြီး ရှေ့ပိုင်းမှာ ဆန်းသစ်ထားတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
ဟွန်ဒိုင်း ဂရေ့စ်နဲ့ တူပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှိ ဒယ်လီဂါ ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂.၅ အင်ဂျင် တာဗို့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကို သုံးပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေ ၈၅ လောက် ထွက်ပါတယ်။ ဂီယာ လေးချက် အော်တို ဖြစ်ပြီး ဒရိုင်ဘာ လေအိတ်၊ အနောက် ဆင်ဆာတွေ ရှိပါတယ်။ ၁၀ (သို့) ၁၂ ခုံပါရှိပါတယ်။ မော်ဒယ် အမြင့်တွေမှာတော့ စပီကာနဲ့ အခြား အဆင့်မြင့် ပါဝါ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါရှိပါတယ်။ ကီးလပ်စ်နဲ့ ဒီဗီဒီ ပလေယာတွေကိုလည်း ရရှိဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဗန် ပုံစံ ခရီးသည် များများဆန့်တဲ့ ကားအမျိုးအစားကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် ဟွန်ဒါ အိတ်ခ်ျ ၀မ်း က အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကို ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တော်တော် လူသုံးများလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ခန်းမှာ ထည့်စရာနေရာတွေ ပါရှိတဲ့အတွက် လုပ်ငန်း နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှာ သုံးနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂.၄ လီတာ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်၊၂.၅ လီတာ ဒီဇယ် အင်ဂျင်၊ ၃.၀လီတာ အင်ဂျင်တွေကို ထုတ်ပါတယ်။ ပထမမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ် အနိမ့်နှစ်တွေမှာ မန်နျုးယယ်သာ အလာများပါတယ်။ အတွင်းခန်းကတော့ ဂီယာ ဘောက်စ်မှာ ဒုတိယ မျိုးဆက်နဲ့မတူ နဂို ကားတွေလိုပဲ ရှေ့ထိုင်ခုံ နှစ်ခု ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ အတွင်းခန်းပုံကတော့ နည်းနည်း ခေတ်ဟောင်း ပုံဆန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းများမှာ ၂၀၀၃ ၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်လောက်ကို ကျပ်သိန်း ၁၃၅ ကနေ ၁၅၀ လောက် ထိရှိပါတယ် မော်ဒယ်အမြင့် ဂရန် စတေရှင်းတွေလိုတော့ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ နား ကပ်နေတဲ့ ဈေးတွေ သိပ်မရှိဘူး။